Home » fanorenana » Paikady momba ny renivohitra any Afrika Andrefana: misy COVID-19
Filohan'ny Vondrona AfDB Dr. Akinwumi Adesina momba ny paikady momba ny renivohitra Afrika Andrefana: misy COVID-19
Araka ny Ny kaontinanta afrikanina dia sahy mitazona ny fiparitahan'ny COVID-19 ao anatiny sy ivelan'ny fari-taniny, ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana dia miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny paikadim-bolan'olon-tokana any Afrika Andrefana hanomezana drafitra asa any amin'ny faritra Afrika Andrefana.
Miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina toekarena any amin'ireo firenena afrikanina Andrefana (ECOWAS), ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana (AfDB) dia nanoritsoritra ny drafi-paikady momba ny teti-bolan'ny olombelona Andrefana.
Ny Bank dia nanao dinika forum mpandray anjara virtoaly hanoritana ny paikadin'i Afrika Andrefana momba ny renivola miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Economic Community of West Africa States (ECOWAS).
Ny forum, izay namory mpandray anjara maherin'ny 100 avy amin'ny lafivalon'i Afrika tamin'ny faran'ny volana aprily, dia nanaiky ny hampiasa vola amin'ny renivola mba hanafainganana ny fampandrosoana sy ny fanambinana ara-toekarena.
Martha Phiri, talen'ny AfDB an'ny Human Capital Bank, Human and Skills Development Department, dia nilaza fa ny iray amin'ireo laharam-pahamehana stratejika dimy an'ny Banky dia ny "Hatsarao ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny Vahoakan'i Afrika" izay miaiky fa ilaina ny mampiofana ny tanora any Afrika ho an'ny ny asa ankehitriny sy ny ho avy.
“Asa an-tapitrisany no norahonana vokatr'izany Areti-mifindra COVID-19, miaraka amin'ny asan'ny asa sasany efa lany tamingana, saika mandritra ny alina, ”hoy izy nanokatra ny kabariny tao amin'ny forum.
Nisy mpandahateny hafa nanao famelabelaran-kevitra momba ny paikady ary nanasa ny heviny momba ny tanjony sy ny drafitr'asa avy amin'ireo mpandray anjara ary nahitana solontenan'ny minisitera, departemanta ary masoivoho avy amin'ny fanjakana 15 ECOWAS, mpiara-miombon'antoka fampandrosoana, fikambanana fiarahamonim-pirenena, akademia ary sehatra tsy miankina. .
Tatitra farany nataon'ny Banky Fampandrosoana an'i Afrika momba ny revolisiona indostrialy fahefatra any Afrika, izay nilaza fa ny automatisation dia hisolo ny 47 isan-jaton'ny asa ankehitriny amin'ny taona 2030.
“Ny fanakorontanana, ny nomerika ary ny fanatontoloana dia miteraka fanovana haingana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fahaiza-manao ary ny sehatry ny asa. Ireo fanovana ireo dia manasongadina ny fitomboan'ny elanelana misy eo amin'ny haavon'ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa ho avy any amin'ny faritra, sy ny fangatahan'ny mpampiasa fahaiza-manao mifandraika amin'izany, ”hoy ny Banko tao amin'ny tatitra nataony.
"Mba hamoahana mialoha sy hanomanana ny faharetan'ny fanjakanay hiatrika ny toe-javatra rehetra, dia noporofoina fa zava-dehibe ny fandinihana ny toe-java-misy amin'ny renivola, hamaritana ny paikady sy ny drafitra ho an'ny faritra", Finda Koroma, lefitry ny kaomisera ECOWAS Filoha, nilaza tamin'ny mpanatrika.
Ny paikady ECOWAS, novolavolaina niaraka tamin'ny fanohanan'ny orinasan'ny consultant Ernst & Young Nigeria, dia mifantoka amin'ny fanabeazana, ny fampandrosoana ny fahaiza-manao ary ny fanamby sy ny asa any amin'ny faritra ambanivohitra.
Ny feedback dia hampidirina ao amin'ny tatitra farany, izay hanolotra paikady sy vahaolana amin'ny fampiasam-bola amin'ny renivohitr'i Afrika Andrefana mba hanafainganana ny fampandrosoana sy ny fanambinana ara-toekarena.
Tao amin'ny forum ihany koa ny kaomisera misahana ny fampianarana, siansa ary kolontsaina ECOWAS, Profesora Leopoldo Amado; Talen'ny ECOWAS ho an'ny fanabeazana, siansa ary kolontsaina, Profesora Abdoulaye Maga; ary Dr. Sintiki Ugbe, talen'ny ECOWAS ho an'ny raharaha maha-olona sy sosialy.
Ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana sy ny governemanta Japon dia niara-namatsy ny ECOWAS Human Capital Strategy izay antenaina farany hivoaka amin'ny volana Jona (volana Jona).
Ny filohan'ny vondrona AfDB Dr. Akinwumi Adesina dia nangataka mpiasam-panjakana afrikana amerikanina sy mpitantana orinasa hanangana fiaraha-miasa vaovao sy maharitra izay hiaritra mihoatra ny areti-mandringana COVID-19 any Afrika.
Nomarihiny tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny faran'ny volana aprily fa ilaina ny ezaka haingana ara-pahasalamana sy ara-toekarena mba handresena ny valanaretina COVID-19 any Afrika. Nandritra ny lahateniny nandritra ny webinarin'ny Birao Orinasa Corporate Africa (CCA) manerantany dia nilaza i Adesina fa: "Fahafatesana iray no maty loatra", ary "ny maha-olombelona antsika rehetra no tandindomin-doza ..
Ny CCA dia orinasam-pandraharahana any Etazonia izay mampiroborobo ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Etazonia sy Afrika. Nandrisika ny mpandray anjara mba ho mpiambina ny rahalahiny sy ny rahavavaviny, hoy i Adesina fa ilaina ny manadino ny tsy fitoviana manerantany, sy ny fiantraikan'ny firenena manankarena sy mahantra.
Nasongadin'i Adesina ny fifamatoran'ny Banky $ 3 miliara $ "Fight COVID-19" farany teo, ho toy ny fatorana ara-tsosialy natolotry ny dolara amerikana.
Ny fatorana, tafahoatra amin'ny $ 4.6 miliara dolara, dia voatanisa ao amin'ny London Stock Exchange.
Ny AfDB koa dia nanangana COVID-10 US $ 19 Response Facility ho fanampiana ireo governemanta sy orinasa afrikanina.
Ny fonosana valin'ny Banky dia misy 5.5 tapitrisa dolara natokana ho an'ny governemanta afrikanina, 3.1 tapitrisa dolara amerikana ho an'ireo firenena latsaka ao ambanin'ny tahiry afrikanina ho an'ny fampandrosoana afrikanina, ary US $ 1.4 miliara ho an'ny sehatra tsy miankina.
Nametraka fanontaniana maro momba ny rafitra fitsaboana i Afrika, hoy i Adesina fa mila mihoatra ny fandaniana avo roa heny amin'ny faritra io faritra io. Notanisainy ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa sy ny orinasa fivarotam-panafody ao amin'ny kaontinanta ho toy ny fotoana fampandrosoana sy fampiasam-bola.
Nomarihiny fa na dia trano fonenan'orinasa 7,000 any Shina aza, ary India 11,000, Afrika kosa, manana 375 fotsiny, na dia ny mponina ao aminy aza dia mitovy amin'ny antsasaky ny mponina mitambatra goavambe Aziatika.
Nasongadiny fa na dia ambany aza ny tahan'ny aretina COVID-19 raha ampitahaina amin'ny eran'izao tontolo izao, dia mitombo ny fahatsapana fa maika noho ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana eto amin'ny kaontinanta.
Amin'ny fijerena ny krizy ankehitriny sy ny sisa, niantso ny fiaraha-miasa maika, vaovao ary maharitra i Adesina izay tsy hamela na iza na iza any aoriana. Ny filankevi-pitantanana sy filoham-pirenena afrikanina, Florie Liser, dia nidera ny andraikitry ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana ho tompon'andraikitra amin'ny famaliana ny krizy atsy Afrika.
"Ny areti-mandringana COVID-19 dia mandrahona ny hamafa ny fitomboana tsy misy toa izany any Afrika ary ny tombony ara-toekarena tao anatin'ny folo taona lasa," hoy izy.